विशिष्ठको नाम भजाउँदै हुने राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने कार्यविधि पारित
आर्थिक सहायताका नाममा भईरहेको राज्यकोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र व्यवस्थीत गर्न स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाको सक्रियतामा बनाइएको कार्यविधिलाई आज मन्त्रीपरिषदको विधयक समितिले संशोधन सहित पारित गरेको हो ।
फेसमा भएको कालो पोतो , कालो दाग, चाउरी पना हटाउने उपाय
अनुहार चम्काउन सौन्दर्ये प्रशाधनमा हजारौ खर्च गर्छन Beauty Parlor धाउछन । तर कतिपय यस्ता सामग्रीले कुरुप बनाएका थुप्रै उदाहरण पनि छन् ।
अदुवाको रसमा या काढ़ामा मह मिसाएर खानाले खोंकि सन्चो हुन्छ ।
दुधखादा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
दुध हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने पौष्टिक पदार्थ हो । दुधले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पुर्याउनुका साथै मष्तिष्कलाई निकै फाइदा गर्छ ।
वाशिंगटन डिसी का वहान चालक अमेरिका कै सर्बाधिक खराब
विश्वको सर्बाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डिसी वहान चालक अमेरिका कै राष्ट्रिय स्तर कै सर्बाधिक खराब अवस्थामा भएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
चिया खाऔ - क्यान्सरलाई भगाऔ
दिनको कम्तीमा ५ कप चिया पिउने पुरुषमा प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
अनार खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक
अनार स्वास्थ्यका लागि निकै गुणकारी फल हो । अनारको फलमात्र नभएर अनारको रुखका सबै चिजमा औषधीय गुण हुने बताइन्छ ।
रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने हो ? त्यसो भए खर्वुजा खानुहोस्
प्राकृतिक रुपमा उच्च रक्तचापको पूर्व अवस्थालाई नियन्त्रित गर्न खर्वुजा खाएमा निक्कै हदसम्म सही हुने अनुसन्धानहरुले देखाएको छ ।
लिची स्वास्थ्यकोलागि फाइदाजनक
लिची स्वास्थ्यवर्धक हुनुका साथै यससँगै पोष्टिक गुण पाइन्छ । लिचीमा कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन सी र बि कम्प्लेक्ससँगै पोटाशियम, क्याल्शियम जस्ता खनिज पदार्थ पाइन्छ ।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री जूलिया गिलार्डलाई एक प्रश्न सोध्दा त्यहाँको एक रेडियोका प्रस्तोताले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । हावर्ड स्याटलरले लाइभ अन्तरवार्ताका क्रममा गिलार्डलाई उनको पार्टनर गे अर्थात समलिंगी हो भनेर प्रश्न सोधेका थिए ।
एसएलसी फेल हुनेलाई हरिवंशदेखि बिल गेट्ससम्मको साथ
२९ जेठ, काठमाडौं । सधैंका वर्षहरुमा जस्तै यसपालि पनि एसएलसीमा जाँच दिएकामध्ये आधाभन्दा धेरै विद्यार्थी फेल भए । परीक्षामा असफल भएपछि निराशा र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै हो । फेल भएको पीडा सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्या जस्तो कठोर निर्णय समेत गर्ने गर्छन् । तर, एसएलसीमा फेल हुनु नै जिन्दगीमा असफल हुनु होइन । घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ भने झैं जाँच दिने मान्छे फेल हुन्छन् । यसरी पढाइमा असफल र फेल भएका मान्छे पढेकाभन्दा ‘सेलिबि्रटी’ भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
फेसबुक चलाउदा जान्नैपर्ने केही कुरा
फेसबुक अकाउण्ट खोलेपछि सायदै मान्छे होलान् जो तस्वीर शेयर गर्दैनन्, स्टाटस अपडेट गर्दैनन् । तथा आफ्ना साथीहरुसँग च्याटमा मीठा मीठा कुरा गर्दैनन् ।
अण्डा खानुका फाईदाहरु
मोटोपना घटाउन मदत गर्र्छ :- युनिभरसिटी अफ मिसौरीको अनुसार जुन मानिस मोटोपना घटाउन चाहन्छ अण्डाको परिकार खान उपयुक्त हुन्छ उसको शरीरको तौल चाडै कम हुने बताएको छ ।
बिरालोले बाटो काट्यो, नआत्तिनुहोस् शुभ पनि हुन सक्छ
हामीले बिरालोले बाटो काट्यो भने त्यो अशूभ भयो भन्दै दुःख मनाऊ गर्छौ र बिरालोले बाटो काटेको देखेपछि हामी जहाँको त्यही अडिन्छौ जबसम्म अन्य मानिसले त्यो बाटो काट्दैन तबसम्म हामीले त्यो
महाभारतसंग जोडिएका १० गोप्य कुरा
धेरैले महाभारत पढेका छन्, थोरैले बुझेका छन् र त्यसमाथी पुरै महाभारत त निकै कमले मात्र पढेका बुखेका छन्। संसारकै सबैभन्दा ठूलो महाकाब्य महाभारत आफैमा एउटा महासागर जसलाई तर्न सजिलो छैन् । त्यसैले यहाँ महाभारतसम्वन्धी केही जनमानसमा थाहा नभएका १० कुरा प्रस्तुत गरिएको छ ।
अन्डाको सेतो भागले रक्तचाप घटाउँछ
वैशाख ९ - अन्डाको सेतो भाग बडो गुणकारी हुन्छ । यसमा रक्तचाप घटाउने क्षमता हुन्छ । साथै यसको कुनै नकारात्मक प्रभाव पनि पर्दैन ।
कोठीहरुले पनि तपाइको व्यबहार र भाग्य बताउछन...
मानिसहरुको शरीरमा कोठी हुनु त सामान्य कुरा हो । सायद तपाई हामी मध्ये कतिलाई त थाहा नै नहोला की कोठीले पनि मानिसको भाग्य निर्धारण गर्दछ अर्थात् ज्योतिष शास्त्रमा कोठीले पनि
स्याउको नियमित सेवनले स्वास्थलाई फाईदा
स्याउलाई निकै हितकारी फल मानिन्छ । यो पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण हुन्छ । यसले केवल रोगसँग लड्न मद्दत मात्र गर्दैन सरीर स्वस्थ राख्न वा रोगको रोकथामकै लागि सहयोग गर्छ ।
लसुनको हरियो पात खानुको फाइदा
लसुनलाई आयुर्वेदमा ठूलो औषधि मानिन्छ । लसुनको औषधीय गुण आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले पनि स्विकार गरेको छ । लसुनका पोटी अर्थात् केस्राले तरकारी स्वादिलो बनाउने मात्र होइन पेट सम्बन्धि विभिन्न विकार पनि हटाउँछ । लसुनको केस्रा मात्र होइन हरियो पात पनि त्यत्तिकै गुनिलो हुन्छ ।
धुलो-धुँवाबाट आँखालाई बचाउ
गर्मी सुरु भएलगत्तै अस्पतालमा आँखासम्बन्धी समस्या लिएर आउने विरामीको संख्या बढेको छ ।
तपाइँ सुतेका बेला कतिको घुर्ने गर्नुहुन्छ ?
घुर्ने मानिसहरूमा मोटोपन, धूम्रपान गर्ने वा अत्यधिक कोलस्टेरोल भएका व्यक्तिहरूको अपेक्षा हृदय रोगको खतरा निकै हुने गर्दछ । यो कुराको जानकारी हालै गरिएको एक नयाँ अध्ययनबाट देखिएको हो ।
अनुहारको सुन्दरता बढाउन मेवाको प्रयोग निकै उपयोगी
सुन्दरता विशेषज्ञहरु मेवाको प्रयोग छालालाई स्वस्थ तथा सरीरलाई कामूक बनाउन निकै उपयोगी हुने बताउँछन् ।
तीतेकरेलाको सेवनबाट हुने फाइदा:
खानामा रुचि बढाउँछ । खाएको कुरा राम्ररी पचाउँछ । पेट सफा राख्दछ । कब्जियत हुन दिँदैन । पेटसम्बन्धी विभिन्न रोगजस्तै, ग्याष्ट्रिक, अल्सर आदिलाई हटाउँछ ।
इनर्जी ड्रिंक्स पिउनुहुन्छ ? होसियार हुनुहोस !!!
रेडबुल, म्याट्रिक्स जस्ता अनेक नामका इनर्जी ड्रिंक्स बजारमा छन् । शक्तिबर्धक पेय भनिने यी स्वादिष्ट पेय पछिल्लो समयमा युवाहरुमाझ निकै लोकप्रिय पनि बनिरहेका छन् ।